Batman: Arkham Underworld dia mametraka anao amin'ny andraikitr'ilay olon-dratsy handoto an'i Gotham | Androidsis
Ravao ny araben'i Gotham ary resaho ny Knight Knight ao Batman: Arkham Underwold
Midoboka ao anaty avy amin'ny fomba fijerin'ilay olon-dratsy amin'ny tantara, sarimihetsika na lalao video, manome nuansa isan-karazany izy io ary mety hahatonga antsika hahita ny lafiny maha-olona kokoa an'io toetra io izay matetika ilay mitondra "bandy tsara" avy amin'ny sarimihetsika eny an-dalambe noho ny mangidy. Ao amin'ny sarimihetsika The Dark Knight, afaka mahita Joker olombelona bebe kokoa isika izay mampiavaka azy amin'ny faran'ny andro Heath Ledger Fomba manokana hanandramana hahatakatra ny hadalana adala izay entin'io toetra mampidi-doza io ary avy amin'ny lafiny malemy paika indrindra dia afaka manjary mankafy ny ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mitranga izany amin'ny ambin'ireo sarimihetsika Batman, noho izany dia tena mahaliana ny manatona an'ireo fomba ireo foana.
Misy zavatra momba an'i Batman: Arkham Underworld, na izany aza tsy avy amin'ny lafiny sentimental kokoa, saingy avy amin'ilay iray izay ahafahantsika mampihorohoro ny olom-pirenenan'i Gotham rehefa tena manao ratsy isika. Eto isika dia miditra tanteraka amin'ny tantaran'ireo olon-dratsy hanatanteraka iraka sy fika hafa, raha ny "bandy tsara" kosa dia hiezaka ny hampijanona ny ratsy ataontsika. Ny andraikitra dia takalo amin'ny lalao video izay mirehareha amin'ny karazana console ho an'ny kalitao teknika tsara izay manintona mpilalao maro eto an-tany.
1 Matetika ny villains no mahafinaritra kokoa
2 Vohay ny olon-dratsy ratsy indrindra
Matetika ny villains no mahafinaritra kokoa
Afaka manome toky an'izany isika midira amin'ny hoditry ny olon-dratsy Mety hahafinaritra kokoa noho ny maha-lehilahy tsara mahazatra antsika izay saika fantatsika hoe ahoana no hiafaran'ny tantarany. Na mandray ny volony am-perinasa izy na miafara amin'ny famonjena ny planeta amin'ny fandringanana tadiavin'ny olon-dratsy ratsy indrindra. Lalao video izay mampiasa ny iray amin'ireo angano lehibe indrindra amin'ireo fiovana niovaova toa ny Dungeon Keeper, ary fotoana nahafahanay namolavola ny fomba hahatongavantsika ho ratsy indrindra amin'ny rehetra.
Any Batman: ny mpilalao Arkham Underwold dia tsy maintsy miova ho Batman. Ny lasa no nitondra anayho an'izao rehetra izao amin'ny lohateny Fampiononana Arkham Asylum, na dia miverina taona vitsivitsy mialoha ny voalohany aza isika.
Hifehy ny sasany amin'ny ny endri-tsoratra Batman malaza indrindra, hitarihana anao amin'ireo tantara miandry anao amin'ity lohateny ity izay manana fitoviana maro ara-teknika sy sary amin'ny zavatra azontsika atao toy ny lalao karazana console. Avelao hiomana ny bateria.
Vohay ny olon-dratsy ratsy indrindra
Rehefa mandroso amin'ny tantara eo alohantsika isika, dia ho afaka hamaha ny ambiny amin'ireo olon-dratsy amin'ity lalao mahafinaritra sy tany am-boalohany ity noho ny fihenjanana ny fahafehezana ny ratsy indrindra amin'ny tanànan'i Gotham. Ny zavatra mahatsikaiky momba ny lalao dia ho afaka ihany koa ianao tantano Batman indraindray, noho izany dia manana tanjona maro samihafa isika rehefa mankafy an'i Batman: Arkham Underworld.
Ny filalaovana ny lalao dia mifototra amin'ny fitantanana toetra amam-panahy ary mahita izay mety ho karazana interface fa ny Sims izay tsy maintsy alehantsika fanavaozana ny tobin'ny olon-dratsy. Ho an'ireo mahalala teny anglisy kely dia tena mahasarika ny maso ny feo tany am-boalohany ary ny sary 3D na dia mahasarika maso aza dia mety ho somary manjavozavo.
Izahay dia miatrika ireo fanavaozana ny base izay tena torotoro naverina tamin'ny lalao hafa ary eto no ahitantsika, na dia ny lohahevitr'ireo olon-dratsy na Batman, zavatra azo antoka fa hisarika ny sain'ny mpilalao maro, na dia tsy ho betsaka aza ireo hijanona ao aoriana.
Misy ny lalao maimaimpoana miaraka amin'io maody freemium fantatry ny rehetra io.
Manana sary izany tena tsara bikaFa rehefa misokatra io dia mety ho lasa malahelo kokoa amin'ny asa. Na izany na tsy izany, lohateny ankafizin'ny teknika izy io ary bebe kokoa noho ny lohahevitra voakasik'izany. Mety ho tsara lavitra kokoa izany, saingy misy ny fototra hitondrana ny tanànan'ny Gotham ho eo amin'ny efijery. Hanana ny kinova TellTale Games foana ianao.
Volavola tsara amin'ny ankapobeny
Ataovy ho olon-dratsy
Tsy misy hetsika bebe kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ravao ny araben'i Gotham ary resaho ny Knight Knight ao Batman: Arkham Underwold
Samsung Galaxy S8: RAM 6GB ary daty famoahana voalohany